Imichilo yenjoloba yemishini isetshenziselwa ikakhulukazi amakhabethe nemishini. Izinto ezisemqoka zokukhiqiza yi-EPDM, i-PVC, injoloba ye-nitrile, ne-silicone iraba. Ikakhulu badlala indima yokulungisa, ukuvala umsindo, ukungena kwamanzi, ukungabi nothuli, ubufakazi bezinambuzane nokuvala uphawu.
Umucu wokufaka uphawu ngumkhiqizo obeka uphawu lwezinto ezithile futhi kwenze kungabi lula ukuvula. Idlala indima ekumuncekeni kokushaqeka, okungangeni manzi, ukwahlukanisa umsindo, ukufudumeza ukushisa, ukuvimbela uthuli, futhi futhi kunokunwebeka okukhulu, impilo yenkonzo ende, ukumelana ne-aning ngentengo yokuncintisana. I-seal strip yethu ingahlangabezana nesicelo sakho sokusebenzisa nokuklama.
Inkampani yethu yamukela umugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme, sebenzisa izinto zokusetshenziswa ezivela e-USA, eNetherland, eKorea naseJalimane, enezinto ezihlukile zokwenziwa kwama-rubbers, inhloso yokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephansi. Sizimisele ukusebenzisana nabangani abavela kuwo wonke umhlaba ukwakha ikusasa eliqhakazile ndawonye.
Umugqa wenjoloba we-foam unempahla ehlukile. Okuvame ukusetshenziswa yi-EPDM. Ifektri yethu inikela ngemichilo esezingeni eliphezulu enganamatheli, efanelekile kuzo zonke izinhlobo zeminyango namawindi ahlukahlukene, njengeminyango yokhuni, iminyango yepulasitiki-insimbi, umnyango wezokuphepha, amasango ahambayo, iminyango yokuhambisa, iminyango yemoto njll. unekhathalogi cishe engenamkhawulo wokusika umugqa wenjoloba kanye namagwebu, kufaka phakathi amamaki amaningi ezentengiso namamaki wokucaciswa kwe-BS, ochwepheshe kanye nama-rubbers ajwayelekile afaka iViton, Neoprene, Nitrile, Silicone, EPDM, izipanji nogwebu. Ibanga lethu losayizi likhulu futhi singasika ngosayizi nge-oda ngalinye lapho lifunwa khona. Uma unesidingo sochwepheshe, sicela uxhumane nathi.